Harbortouch ထံမှအခမဲ့ POS စနစ် Get လုပ်နည်း | ရွှေ Web ကိုဆုပေးပွဲ
အားဖြင့် Darin Carter က | ဇွန် 13, 2018 | ဘလော့ |0မှတ်ချက်များ
အဆိုပါ POS (ရောင်းရန်၏ point) System ကိုလက်လီနှင့်စားသောက်ဆိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအရှိဆုံးအရေးပါစုတစုတစျခုဖွစျသညျ, ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ. ငွေမှတ်ပုံတင်ကျော်သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် POS system ကိုထားရှိခြင်းသည်သင်တို့အပေါင်း၌အသေးစိတ်အရောင်းအစီရင်ခံစာများအရကူညီပေးသည်. ထို့ကြောင့်, ကစာရင်းကိုင်များအတွက်သကဲ့သို့ကောင်းစွာငွေရှင်းကောင်တာတွင်အဘို့သည်ကြီး. ဤသည် POS software ကိုထိုကဲ့သို့သောရောင်းချခဲ့ကို item အဖြစ်အားလုံးအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်, မည်သည့်ပစ္စည်းများအပေါ်ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ပရိုမိုးရှင်းများ, ယင်း၏ရောင်းချမှု၏အချိန်နှင့်လည်းငွေရှင်းကောင်တာတွင်၏နာမတော်. ဒါဟာတိကျမှန်ကန်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်ဤအရပ်မှအမှားမပါအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်. သငျသညျလက်လီရောင်းချမှုများအတွက် Harbortouch ကနေအခမဲ့ POS system ကိုရနိုင်, Salon, စားသောက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်အဖြစ်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း.
Harbortouch ပြည့်စုံ POS system ကိုဖြေရှင်းချက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေး. ဒါဟာ POS ဟာ့ဒ်ဝဲပါဝင်သည်, POS software ကိုအဖြစ်မဆိုသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအရာဘက်ပေါင်းစုံကုန်သည်န်ဆောင်မှုများ, လက်လီစတိုးဆိုင်များ, Salon နှင့်စားသောက်ဆိုင်များသို့မဟုတ်ကဖေး. သငျသညျသင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သောအရာကိုအကြောင်းကိုသုတေသနပြုအပေါ်နာရီပေါင်းများစွာရန်မလိုပါ. Harbortouch အချို့ကိုသင်အခြေခံမေးခွန်းများကိုမေးတယ်နှငျ့သငျကြောင်းဖြေကြားရန်ရှိသည်. ထိုအခါ, သူတို့သင်အမှန်တကယ်သင့်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်ဘို့လိုအပ်တယ်စနစ်၏အဘယ်အရာကို type ကိုသိရကြလိမ့်မည်. တစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာအခကြေးငွေနှင့်အတူသူတို့ကိုသင်နေတဲ့ကြီးမြတ်ဝန်ဆောင်မှုရနိုင်.
Harbortouch သင့်ရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက်သီးခြား POS စနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေး. သင်ကအကောင်းဆုံးသင်ရှိသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်နိုင်ပါသည်. အဆိုပါ POS စနစ်၏အသီးအသီးသောအသီးသန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုကိုဖုံးလွှမ်းသည်ဟုကွဲပြားခြားနားသော features တွေရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်, အဆိုပါ et ကို click အခမဲ့ '' option ကိုများအတွက် Started သူတို့ကိုမေးမေးခွန်းများကိုအချို့ကိုဖြေကြား. ဤတွင်သူတို့သင်သည်ထိုသို့သောအဝတ်သို့မဟုတ်ဖိနပ်အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. သင်မေးပါလိမ့်မယ်, ဟိုတယ်သို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်, အလှပြင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်စသည်တို့ကို. သင်တို့ရှိသမျှသည်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပြီးစီးပါပြီပြီးတာနဲ့, သူတို့သည်သင်၏အခမဲ့ setup ကိုလျှောက်လွှာ forward ပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါအခမဲ့ POS စနစ် Get လုပ်နည်း?
Harbortouch မှသင်၏လက်လီစတိုးဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များများအတွက်အခမဲ့ POS system ကိုရဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသောကြောင့်. သင်ကရဖို့တချို့ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာရန်ရှိသည်. ဤအရာများသည်:
ဆက်သွယ်ရန် Harbortouch: သင်ပထမဦးဆုံးအခမဲ့ POS system ကိုရတဲ့အတှကျ Harbortouch ကိုဆက်သွယ်ရန်ရှိသည်. အဲဒီအတွက်, သငျသညျရောင်းချရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏လွတ်လပ်သောအမှတ်လျှောက်ထားရန်ရှိသည်. အတည်ပြုချက်ရယူပါ: သငျသညျရောင်းချမှုစနစ်၏အခမဲ့အမှတ်လျှောက်ထားကြပါပြီပြီးတာနဲ့, သင်သည်သူတို့၏ခွင့်ပြုချက်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်. သငျသညျအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအဘို့အတည်ပြုရသည့်အခါ, သငျသညျသှားဖို့ကောင်းပါတယ်. သင်ရုံထောက်ခံမှုနှင့် services.Free တပ်ဆင်ခြင်းကိုဖုံးသောလစဉ်ကြေးပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်: သင်သည်သူတို့၏သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းပညာရှင်များအားဖြင့် Elite အပေါ် Harbortouch မှအခမဲ့တပ်ဆင်ရလိမ့်မယ်. သူတို့ရှိလူအားလုံးတို့သည်ပညာရှင်များကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုကြသည်. ထို့ကြောင့်, သင်တစ်ဦးအကြီးနှင့်စပ်ရာမရှိသောဝန်ဆောင်မှုရလိမ့်မယ်.
ကြောင်းနှင့်အတူသငျသညျကိုလညျးဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်တစ်သက်တာအာမခံရလိမ့်မယ်. အဘယ်သူမျှမကအခြားရှေ့ပြေးကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်. သငျသညျအခမဲ့ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက် installation ကိုရကြလိမ့်မည်, အခမဲ့ menu က programming ကိုအဖြစ်အခမဲ့စက္ကူထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ. သင်က install လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်သည်သူတို့၏ထမ်းများမှအကောင်းဆုံးထောက်ခံမှုကိုရလိမ့်မယ်.
Harbortouch အားဖြင့်ရောင်းချခြင်းစနစ်၏အခမဲ့အမှတ်ရွေးချယ်ခြင်းနည်းလမ်းများစွာ၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်. သငျသညျ POS software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲပေးကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သုတေသနပြုနာရီဖြုန်းဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. Harbortouch သင်သည်သင်၏လက်လီစတိုးဆိုင်များများအတွက်ရောင်းချခြင်းစနစ်၏အတန်းအစားပွိုင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်း, စားသောက်ဆိုင်, အလှပြင်ဆိုင်နှင့် Spa မ်ား, သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်များ. ဒါဟာသင်သည်အစဉ်အရနိုင်သည်ကိုအများဆုံးလုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. သင်ရုံအွန်လိုင်းအစီအစဉ်အတွက်လျှောက်ထားရန်ရှိသည်. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အခမဲ့တပ်ဆင်နှင့်မျှမရှေ့ပြေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ POS စက်ကိရိယာများကိုလက်ခံရရှိဦးမည်. သငျသညျပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုပင်လဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုကြေးအလွန်လျော့နည်း. ဒါကအနည်းဆုံးအခကြေးငွေအပေါငျးတို့သမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်.
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နှင့်အကောင်းဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံး POS system ကိုရှာနေခဲ့လျှင်, ထို့နောက် Harbortouch ကြောင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်. သင်သည်ထိုသူတို့ကကမ်းလှမ်းအခမဲ့ POS system အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်အခြေခံပြီးအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲပါဝင်သည်. ဒါဟာအစသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာသင့်ရဲ့ရောင်းအားကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာအတှကျလိုအပျပေါငျးတို့သမရှိမဖြစ်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူကြွလာ. ဒါကြောင့်, ဒီကသင်၏တန်ဖိုးရှိသောအချိန်တွေအများကြီးအဖြစ်ပိုက်ဆံချွေ. Harbortouch ထိထိရောက်ရောက်အားလုံးသင့်ရဲ့ POS system ကိုလိုအပ်ချက်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဂရုစိုက်နိုင်ပါတယ်.